अब न्याय नै गोलाबाट दिने कि श्रीमान् ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
अब न्याय नै गोलाबाट दिने कि श्रीमान् ?
प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्न नपाउने, प्रधानन्यायाधीशले फुल कोर्ट बोलाउने तर बस्न नपाउने, उनैले सही गर्नुपर्ने तर बोल्न नपाउने । यो कस्तो प्रणाली स्थापित गरिँदै
२०७८ मंसिर ४, शनिबार १९:०६:००
काठमाडौँ । पद्धतिले बाटो बिराएपछि नहुनुपर्ने सबै कुरा हुँदै जान्छन् र ती जायज लाग्दै जान्छन् । न्यायपालिकामा नाराजुलुस, इजलासमै हड्ताल, प्रधानन्यायाधीशलाई आन्दोलनबाट हटाउने प्रयास यी सबै जायज भइसके । प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्न नपाउने, प्रधानन्यायाधीशले फुल कोर्ट बोलाउने तर बस्न नपाउने, उनैले सही गर्नुपर्ने तर बोल्न नपाउने । यो कस्तो प्रणाली स्थापित गरिँदै छ ?
भविष्यमा आउने प्रधानन्यायाधीशका पनि हात बाँधेर कमजोर बनाइँदै छ । कमन ल प्रणालीको एउटा मुख्य विशेषता इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र अरु सबै न्यायाधीश बराबर, न्याय प्रशासनमा प्रधानन्यायाधीशका मातहतमा सबै न्यायाधीश हुनुपर्ने हो ।
तर, यहाँ प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई कमजोर र फितलो बनाइँदै छ । इतिहासदेखि थुप्रिँदै आएको सारा बेथितिको दोषको भारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा एक्लैको थाप्लोमा थोपरिएको छ र बाँकी सबै पानीमाथिको ओभानो बनेका छन् ।
हुन त भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरुकै लागि पेसीमा गोलाप्रथा प्रणाली अपनाउने निर्णय आत्मघाती छ । त्यसैले उनीहरु विभिन्न बहानामा रोक्न पनि खोजिरहेका थिए । वास्तवमा मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले बनाएको नियमावली संशोधनको मसौदा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै अग्रसरतामा गर्न लगाएका थिए । भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलमा रहेका सबैजसो त्यसको विपक्षमा थिए । त्यो निर्णय नहोस् भनेर नै इजलास बहिष्कारदेखि पूर्ण बैठक बहिष्कारसम्मका निर्णय भएका थिए भनेर व्याख्या गर्नेहरुको सर्वोच्च अदालतमा कमी छैन । यद्यपि, न्यायाधीशहरुको दबाबमा यो निर्णय भई छाड्यो । यो भावी प्रधानन्यायाधीशहरुका लागि प्रिय छैन ।
त्यसो त बिहीबार फुलकोर्टको निर्णय लेख्दा पनि अवरुद्ध गर्न खोजियो । एउटा निर्णय लेख्ने सहमति भएकोमा अर्कै लेखेर ल्याइयो र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशकै बीचमा फाटो ल्याउने काम भयो । न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले लेखेर ल्याएको निर्णय पढेर सुनाएपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले फुलकोर्टको निर्णयमै कीर्ते गर्न खोज्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि अरु न्यायाधीशहरुले पनि आक्रोश पोखे । यो सबै खेल हरिकृष्ण कार्की र अरु केही भावी प्रधानन्यायाधीशको रहेछ । त्यसमा आनन्दमोहन भट्टराई पनि देखिए ।
कीर्ते भनिएको निर्णय पुस्तिकामा ‘स्वचालित प्रविधिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने’ विषयमा ‘विस्तृतमा अध्ययन गर्ने’ लेखिएको थियो । तत्काल गोलाप्रथामा जाने सहमति न्यायाधीशहरुका बीचमा भएको थियो । आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरुमै भइरहेको यो मारामारले पनि स्पष्ट पार्छ कि न्यायालय शुद्धीकरणका नाममा अदालतभित्र कुन तहका खुराफात भइरहेका छन् ।
तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा शैलीका न्यायाधीशहरुका व्यवहारले अब सबैमा सबैप्रति विश्वासको संकट बढाएको छ । राम्रै नियतले गरेका प्रस्ताव र निर्णय पनि अब षड्यन्त्र हुनेछन् । इमानदार सल्लाहभित्र पनि षड्यन्त्रको गन्ध आउनेछ । पेसीमा गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणाली अपनाउने निर्णय त्यसैको परिणाम हो । अब यतिले मात्र पनि पुग्ने छैन । भोलि गोलाप्रथाबाटै भएका पेसी व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न उठिरहनेछन् । त्यसैले अब होलेसलमा समाधान खोजौँ । बरु न्याय नै गोलाप्रथाबाट दिऊँ । अदालतमा पढेलेखेका न्यायाधीश घट्दै गएका छन् । तिगडम गरेर राजनीतिमा सक्रिय भएकाहरुले अहिले अदालतमा न्यायको तराजु हातमा लिएका छन् । त्यसैले अब पेसी मात्र होइन, न्याय नै गोलाप्रथाबाट दिने हो कि ?